Weerar lagu qaaday Caawa Hoyga Guddoomiye kuxigeenka Baarlamaanka Jubbaland - Awdinle Online
Weerar lagu qaaday Caawa Hoyga Guddoomiye kuxigeenka Baarlamaanka Jubbaland
Wararka aan Caawa ka helayno Gobolka Jubbada Hoose ee Maamul Goboleedka Jubbaland ayaa ku warramaya in Caawa Bom-gacmeed lagu weeraray Guri uu daggan yahay Mas’uul ka tirsan Maamulkaasi Jubbaland.
Guddoomiye ku Xigeenka Baarlamaanka Jubbaland Cabdi Baaleey ayaa la sheegay in Caawa Koox hubeysan ay Bomgacmeed ku weerareen, waxaana ka dhashay Khasaare kala duwan.
Wararku waxaa ay sheegayaan in Guddoomiye ku xigeenku uu ka bad-baaday weerarkaas Bom-gacmeed ahaa, basle warar ayaa sheegaya in ay ku dhaawacmeed seddex ruux oo ka tirsan Qoyska Cabdi Baaleey.
Kooxdii weerarka fulisay ayaa la sheegay in ay goobta ka baxsadeen, waxana socda howlgallo lagu baadi goobayo dadkii falkaasi ka dambeeyay, waxaana hadda lasoo sheegayaa in guddoomiye ku xigeenka aysan waxba soo gaarin.
Deegaanada Maamulka Jubbaland ayaa waxaa ka dhaca weerarada loo gaysto mas’uuliyiinta ka tirsan Maamulkaasi Jubbaland, waxaana Xalay Magaalada Baardheere ee Gobolka Gedo lagu weeray Mas’uul ka tirsan maamulkaas.
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Saraakiil Ciidan u dirtay Magaalada Kismaayo
Next articleKenya iyo Soomaaliya oo wada-hadallo u bilaawday